Mariin Waajjira Tikaa Wayyaanee Keessatti Adeemsisame ABO fi Dhaabota – Kichuu
HomeNewsAfricaMariin Waajjira Tikaa Wayyaanee Keessatti Adeemsisame ABO fi Dhaabota
Mariin Waajjira Tikaa Wayyaanee Keessatti Adeemsisame ABO fi Dhaabota Mormitootaa Biroo Irratti Duuluu Murteessuun Xumurame.
Ebla 03,2017) Mariin tibbana waajjiroota tikaa wayyaanee keessatti haala yeroo biyyattii fi adeemsa qabsoo ummatootaa yeroo ammaa irratti mari’ate dhaabota bilisummaa fi mirga ummatoota isaaniif falman, akkasumas dhaabota dimokraasiif qabsa’an biroo irratti duuluu kan jedhu murteessuun gudunfamuun hubatame.
Oduun nu dhaqqabe akka ifa godhutti walgahii qaamota tikaa wayyaaneen geggeeffame kana irratti kan argaman namoota 36 ta’uu addeessa. Ministeerri Communicationii fi Information Technology Dr. Debretsion Gebremichael, piresidaantotni naannolee hundi, matootiin quunnamtii naannolee (communication head), namootni tikaa fi amanamtootni sirnichaa walgahii kana irratti akka argamantu eerame.
Ajandaan walgahichaa haala yeroo biyyattii fi sochii qabsoo fi warraaqsaa ummatootni finiinsaa jiraniin walqabatee labsii Command Post labsamee hojii irra oolaa ture akka itti fufuuf ji’a afur itti eda’ame irratti dirqamootni itti aanaan maal ta’uu qabu isa jedhu irratti.
Labsiin yeroo hatattamaa akka itti fufuuf baatiin arfan itti dabalaman erga dhumatanii booda labsicha guutuutti kaasuuf sadarkaa oliitti dhaabota Tumsa Ummatootaa Bilisummaa fi Dimokraasii keessatti argaman ABO, ONLF, SLF fi BPLM akkasumas dhaaba G7 irratti duuluu murteeffachuu isaanii oduun kun ni hubachiisa.
Kunis kan ta’uu fi hojii irra oolu karaa humna tikaa, qaruuxee waraanaa fi humna waraanaan alaa fi keessaan deebisanii of ijaaranii irratti bobba’uu kan jedhuun murtee lafa kaawwachuu isaanii oduun kun ni addeessa.
H/Dn ABO J/Daawud Ibsaa haasaa dhiheenya giddu gala mooraa leenjii ABOtti miseensota WBOf taasisan keessatti mootummaan wayyaanee akka mootummaatti kan hin jirre, lafee qofti kan hafee jiru ta’uu ibsanii, mootummichi humna waraanaa fi humna tikaa qofaan jiraachuuf murteeffachuu isaa eeruun, yaaliin isaa kunis kan bakka hin geenyeef, kufaatii irraa kan isa hin hambisne ta’uu ifa godhan.